Litania Nasionaly Opera, Latvijas Nacionālā opera un balets - Riga
Eoropa Letonia Riga
Adiresy: Aspazijas bulvāris 3, Centra rajons, Rīga, LV-1050, Letonia;
Phone: +371 67 073 715;
Mpikaroka: Ludwig Ludwigovich Bonstedt.
Ny Opera Nasionaly Letonianina no foiben'ny fiainana mozika ao amin'ny firenena. Eo amin'ny sehatra misy ny mpilalao sarimihetsika tsara indrindra, mpandihy sy mpihira. Ny tetik'asa fanorenana dia natsangana tamin'ny fehezan-dalàna mahatalanjona. Na dia teo aza ny afo nopotehiny, dia mbola mitazona ny toeran'ny iray amin'ireo trano tsara tarehy indrindra any Letonia .
Ny tranoben'ny Opera Nasionaly any Letonia dia naorina tamin'ny taona 1863. Avy eo izy no kianja voalohany tao an-tanàna. Hatramin'io fotoana io dia nanangona ny Alemana ny fananganana ny foiben'i Riga , ary nomena ny Aries koa ny tetikasa fanorenana ilay kianja. Nahazo ny fifaninanana i Ludwig Bonstedt. Ny asan'ilay architecty dia nankasitraka an'i Aleksandra II ny toetrany, tsy misy fahalalam-pomba.
Ny tranobe dia niavaka tamin'ny "tranon'akanjo" hafa an'ny Fanjakana Rosiana. Tahaka ny tempoly Grika tranainy izany. Ny fasana dia nosokafana tamin'ny loharano iray misy sarivongan'i Apollo, izay nifanaraka tamin'ny sarivongana hafa, saribakoly sy mozika. Ny Portico of the Theatre dia voaravaka amin'ny seza ionika, ary teo ambonin'ny fantsom-pito dia nisy ny "génie of drama" miaraka amin'ny masony grika sy panther, izay maneho ny fantasy. Ny tsangambato rehetra dia natao tany Berlin, angamba noho ny fandraisan'anjaran'ireo Alemà tamin'ny fananganana ny Opera, dia manana anarana tsy ofisialy "Teatra Alemana".
Ny fanorenana anatiny ao amin'ny Theatre dia tsy dia tsara loatra. Ny efitrano dia natao tamin'ny fomba haingo barock, nampirehitra jiro 753 ny jirony, ny hazavana izay nipoitra tamin'ny alalan'ny fitaratra mozika iray lehibe iray. Noho izany dia noforonina ny atmosfera, voasoritra amin'ny zavakanto.
Inona no mahaliana amin'ny Opera Nasionaly Letonianina?
Voalohany indrindra, te-hanamarika aho fa ny Opera National dia voahodidin'ny valan-javaboary iray, fantsom-pokontany ary boribory iray. Ny fandehanana manodidina ny opera dia hitondra fahafinaretana betsaka. Faharoa, androany ao amin'ny Theatre ny sainan'ny mpijery dia tsy natolotry ny opera afa-tsy ny baolina tsara indrindra ihany koa. Ny mpanakanto manerana izao tontolo izao dia mandray anjara amin'ny famokarana, izay mahatonga ny fampisehoana ho lalindalina kokoa sy mampientanentana. Ny Opera Nasionaly Letonianina no fitaovana maoderina indrindra, noho ny mozika ao anatin'ny rindriny dia milalao toy ny tsy milalao any amin'ny teatra ao Mosko.
Eo akaikin'ny mari-pamantarana misy doka roa:
"Operation Nacionala", lalana 5, 6, 7, 9.
"Aspazijas bulvaris", lalana 3, 4, 6, 10.
Toeram-pialam-boly am-pilaminana ao Ramkalni
Museum of History of Riga sy ny Navigation
Jereo ny Laima
Tetezana mitahiry harona (Riga)
Ny Tranombakoky ny Tantara ao amin'ny Trano Riga
Kianjan'ny Town (Riga)
Face mofomamy amin'ny SPF
25 Best Cookies Recipes
Lindsay Lohan dia niampanga ny mpampakatra tamin'ny famadihana ary nilaza momba ny maha-bevohoka azy
Ahoana no tokony ho bevohoka aorian'ny fiterahana?
Ny anarana sy ny zon'ny ankizy an'i Irina Sheik sy Bradley Cooper
Karazana fitafiana ho an'ny vehivavy
Toeram-pivarotana ho an'ny gara
Jay Zee nanazava ny antony nahatonga azy sy Beyonce niantso anarana roa tsy mahazatra
Ipomoea - fambolena
Kitapom-bozaka - tsindrin-tsakafo sy tsiro avy amin'ny ronono vita amin'ny ronono, siramamy ary trano fandevenana
Ny torohevitra ho an'ny muffins amin'ny fingotra
Inona no hatao ao amin'ilay didim-panjakana?
Manicure - sary amin'ny fantsika
Nahoana ny laminasa no mitete?
Efitranon'ny ankizy ho an'ilay zazalahy
Ny Magic of the Tarot
Ireo herinandro faran'izay mampidi-doza amin'ny vohoka